AirPods 3 iyo Apple Music Hi-Fi Talaadada, May 18? | Waxaan ka socdaa mac
Xanta ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee cusub ee AirPods 3 isla waqtigaas isla markaana ay tahay horumarin xagga tayada codka ee Apple Music ayaa wali si fiican loo joogaa. Xaaladdan oo kale waa warar xan ah oo dhigaya imaatinka AirPodkan cusub iyo tayada maqalka ee Hi-Fi ee Apple Music Talaadada soo socota, 18-ka May.
Warka ku saabsan jiilka seddexaad ee AirPods wuxuu ka yimaadaa meel fog, xaaladdan waxay umuuqataa inay uga dhowaan karaan sidii hore abid soo bandhigiddooda. Ma ahan war ay xaqiijisay Apple, oo ka fog Applena lama filayo inay dhacdo u qabato, si fudud ayey ugu bilaabi lahayd websaydhka si cusbooneysiin ah waxayna ugu faafi doontaa shabakadda si dhakhso leh sidii caadiga ahayd.
Warka / xantu waxay ka timid gacanta youtuber
Luke miani ayaa mas'uul ka ahaa soo bandhigida wararka ay horey ugu soo daabaceen AppleTrack. Dabcan wararka xanta ah ee ku saabsan imaatinka AirPod-kan cusub ayaa ka yimid meel fog mana diidi karno suurtagalnimada mar haddii ay tahay badeecad ay tahay inay soo daahdo xilli hore, ha noqoto WWDC ama ka hor.
Hadda waxaa la filayaa Talaadada soo socota ee 18-ka waxaan ka heli doonnaa soo-saaridda taleefannada dhegaha-furan ee cusub Apple-ka kaas oo yeelan doona naqshad la mid ah tan hadda jirta ee AirPods Pro laakiin aan lahayn qaybta silikoonka iyo iyada oo aan la joojin qaylada firfircoon. Waxaan sugeynaa Talaadada soo socota oo ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods 3 iyo Apple Music Hi-Fi Talaadada, May 18?
Maxay tahay wax aan micno lahayn, waxay noqon doonaan sida airpod-yada lacag la'aanta ah ee wireless 2 laakiin sida ugub, xamaasad, dhamaadka sheekada.